TOTOTRA FOTOTRA FOTOTRA FTEMPORARY, PRICE FACTORY-Tattoo / Eye shadow sticker-Shanghai HUIZI nomerika
Taratasy famindrana rano, ranomainty, sarimihetsika PET, doka
tatoazy vonjimaika volamena
sticker amin'ny tatoazy
Safidy an'arivony natolotra
1pc / opp Kitapo
Hoditra, Ceramic, Matal, Glass ect
Famaritana tatoazy vonjimaika
anarana 2015 metaly farany vy fametaka tombokavatsa, vy vita amin'ny tatoazy
Fitaovana taratasy tranfer + ranomainty nafarana avy amin'ny EU + lakaoly nafarana avy any Korea + sarimihetsika miaro PVC
Size (m * m) 151 * 202mm /6*8.5inch, azonay atao ny manao ny habeny tadiavinao
Ny fotoana farany 4-6 andro iraisana.
MOQ 500pcs / famolavolana (ny volavolan-tsokinay) 1200pcs / famolavolana (endrika manokana)
Famonosana tatoazy vonjimaika
fonosana ara-dalàna dia kitapo 1pc / opp, 1200pcs / ctn. nametaka fonosana manokana, Pls jereo raha misy mahaliana.
Fandoavam-bola sy fandefasana tatoazy vetivety
tahiry entana: 1-2 andro aorian'ny fandoavana.
Custom: 7-10 andro aorian'ny fandoavana.
Seranan-tsambo fanaterana Shanghai / NingBo
Fandefasana Fitaterana an-dranomasina na Express Express (TNT, DHL, EMX, UPS, FEDEX, DHL… sns)
Afaka mandefa tatoazy mafana 6-7pcs sy santionany fonosana ho anao izahay, mifandraisa amiko Pls mba hahazoana ny pitsopitsony :)
Manana drafitra tahiry mihoatra ny 140 izahay, Pls aza misalasala mifandray amiko raha te hanana drafitra tahiry bebe kokoa :)
F1: Orinasa ve ianao?
A: Eny, orinasa izahay, fa tsy orinasa fotsiny, satria manana ekipa mpivarotra, mpamorona endrika, efitrano fampiratiana manokana, afaka manampy ny mpividy hanapa-kevitra hoe inona ny vokatra no safidiny tsara indrindra, ary ny fanontanianao rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora.
F2: Azonao alefa amiko ve ny lisitry ny lisitry ny lisitra sy ny vidiny rehetra?
A: Satria manana entana mihoatra ny an'arivony izahay, na dia zavatra 1 aza dia samy manana habe sy fonosana samihafa, dia sarotra loatra ho anay ny mandefa anao ny katalaoginay sy ny lisitry ny vidiny ho anao. Azafady mba ampahafantaro ahy ny entana, ny habeny ary ny fonosana tianao, amin'izay azonay omena anao ny lisitry ny vidiny tadiavinao ho an'ny fanovozanao.
F3: Azonao atao ve ny mandefa santionany amiko?
A: Afaka manolotra santionany maimaimpoana izahay amin'ny fanombanana anao, fa ny saram-pandefasana ohatra dia tokony aloanao.
F4: Azonao atao ve ny mamorona ny voloko?
A: Eny, azontsika atao, asehoy amin'ny voalohany ny volanao amin'ny mpivarotra anay.
F5: Inona ny ora fanaterana anao?
A: Amin'ny ankapobeny ny fotoana fandefasana dia 15 andro-30 andro. Hanao ny fandefasana haingana araka izay azo atao miaraka amin'ny kalitao azo antoka izahay.
F6: Inona no fomba mety handoavana?
A: L / C, T / T, PayPal, Western Union ary Escrow no ekena, ary raha manana hevitra tsara kokoa ianao dia aza misalasala mizara aminay.
F7: Fomba fitaterana iza no ho tsara kokoa?
A: Amin'ny ankapobeny dia manoro hevitra izahay ny hanao fandefasana an-dranomasina izay mora sy azo antoka. Izahay koa manaja ny fomba fijerinao momba ny fitaterana hafa koa.
F8: Azontsika atao ve ny mampiasa ny mpandraharaha fandefasana azy manokana?
A: Eny, azonao atao izany. Niara-niasa tamin'ny mpandefa maro izahay.Raha mila izany ianao dia afaka manolotra mpampita ho anao.
F9: Ahoana no hifehezana ny kalitao?
A: Manana ny departemanta QC misy anay izahay, ny QC dia hijery ny entana rehetra alohan'ny hamonosana sy mandritra ny famonosana.